Nyanzvi Dzozeya Mutambo weZimbabwe neBrazil
Chikumi 03, 2010
Nyika ichiri kufamba mumufaro mukuru zvichitevera kutamba kwakaita chikwata chenhabvu cheZimbabwe Warriors nechikwata cheBrazil, icho chinozivikanwa seSamba Boys, neChitatu muHarare, kunyange hazvo Zimbabwe yakakundwa 3-0 mumutambo uyu.
Vamwe vanoti dai Zimbabwe yakashandisa mikana yayakawana, ingadai yakakunda Brazil. Vaongorori vemutambo wenhabvu vanoti Zimbabwe yakatadza kushandisa mikana iyi nekuti haina kugadzirira zvakanaka mutambo wayo neBrazil
Chiri kunyanyorwadzawo vatsigiri venhabvu vazhinji ndechekuti Zimbabwe inenge ichitamba nhabvu inonwisa mvura, asi yotadza kuenda mberi mumakwikwi ainenge ichikwikwidza.
VaRobson Masocha vanoti vakambotamba vari muchikwata chevechidiki kuDynamos. VaMasocha vaudza Studio7 kuti vaoona remangwana reZimbabwe rakajeka kana chete pakaumbwa chirongwa chekusimudzira vatambi vechidiki.
Hurukuro naVaRobson Masocha